Momba ny ZHENGXI - Chengdu Zhengxi Hydraulical Equipment Manufacturing Co., Ltd.
Tongasoa eto Zhengxi
Chengdu Zhengxi Hydraulic Equipment Manufacturing Co., Ltd. dia miorina ao amin'ny faritra tsara tarehy Qingbaijiang Free Trade Zone any Chengdu. Ny orinasa dia mandrakotra velarantany 45608 metatra toradroa, ao anatin'izany ny velaran'ny atrikasa mavesatra 30.400 metatra toradroa. Izy io dia mpamokatra matihanina amin'ny milina fanodinana hydraulic any Shina. Ny orinasa dia manana injeniera sy teknisianina maherin'ny 100 ary patanty famoronana nasionaly am-polony. Izy io dia nitazona fiaraha-miasa akaiky amin'ireo oniversite any an-toerana malaza sy oniversite fikarohana nandritra ny fotoana ela ary nanolo-tena ho mpisava lalana teknolojia amin'ny indostrian'ny milina hydraulic.
Ny orinasanay dia manana milina maodely maodely mihoatra ny 60. Toy ny latina adidy mavesatra Japoney, latina mitsangana, milina fanenjana sy milina fitotoana, grinder sns. Ary koa miaraka amin'ny ekipa teknika ambony, mpiasa teknika maherin'ny 100. Hiezaka mafy araka izay azony atao izy ireo amin'ny fikarakarana fitaovana tsara ho an'ny mpanjifanay. Manana departemanta mahaleo tena aorian'ny fivarotana izahay, serivisy aorian'ny varotra feno ho an'ny mpanjifa. Tao anatin'ny 2 ora taorian'ny nahazoana ny antso fanamboarana dia nahatratra ny ora 8 tao amin'ny Faritanin'i Sichuan sy tao anatin'ny 48 ora nanerana ny firenena ny olana. Ary ny injenieranay dia hanome serivisy any ivelany koa.
Mpanjifa manodidina ny World
Tsidiho ny orinasa ny mpanjifanay izao tontolo izao
Mamorona marika mitarika eo amin'ny sehatry ny indostria.
Omeo ny milina azo antoka sy azo antoka ary mahomby indrindra.
Ny karama dia mitovy amin'ny fiverenana, ny vidiny dia mitovy amin'ny sandany ary ataovy toe-javatra mandresy ny mpiasa, ny mpanjifa, ny tompon-trano ary ny mpamatsy.